Tv-ga Aljziira oo Magaca laga badalay iyo Ceeb arintaasi ka Dhalatay#aqriso magaca cusub | Xaqiiqonews
Tv-ga Aljziira oo Magaca laga badalay iyo Ceeb arintaasi ka Dhalatay#aqriso magaca cusub
khilaafaadkaa siyaasadeed ee Wadamada khaliijka ayaa Saameyn ku yeeshay habsami u socodkii tv-ga al ajiizra waxaana niyad jab weyn uu ku yimid wariyaashii ka howlgali jiray Tv-ga.
Waxaana durba bilawaty olale ka dhan Tv-ga oo ka bilowday facebook iyo tuwiter-ka.
Sheikh Wasiim Yuusuf ayaa soo dhigay Boggiis Twutire-ka ”Saxiix Tv—giina Al-KhinZiira(waxa uu kala jeedaa al-jaziira) waxa ay dadka is qarxiya u kala diraan Liibiya tuunis masar badalkeedana annaga waxaan u tagnaa dadkii aad wax yeeleyseen waxaana ka raali gelinaa danbigii aad sameyseen.
balse waxaa jabaab arintaasi ka soo bixisay Khadiija Bin qunah oo ka tirsan wariyaasha Al-jaziira ” Sheikh alaha ku soo hanuuniyo ! waxaan ku jirnaa bil ramadaan waxaana kaa rabay jabaab adna waxaad soo qortay al-khinziira ! hadiiba dadkiina culimada ah sidan u hadlayaan maxaan ka filan karnaa dadkiina Caadiga ah ?
Hase ahaatee sheikh wasiim oo carada ay ku sii badatay ayaa dhankiisa soo qoray” Tv-ga al jaziira hadii aan nahay shucuubta xorta ah ee carbeed waxaan u naqaanaa Al-khinziira(tii doofaarta aheyd) hadda ka dib waxaan ka shaqeyn doonaa sidii aan fatwooyin kaga soo saari lahaa Tv-giina.